Chickpeas: Zvakanakira, Zvivakwa uye Zvinonaka Mapoka!
Zvokudya	 19 January 2019
O chickpea imhando yezviyo inoshandiswa zvakanyanya uye nekudyiwa, kunyanya nevanhu vanotevera a kudya kwevegan, inova iyo ine zero yekudyiwa kwezvigadzirwa zvemhuka. Izvi zvinodaro nekuti chibage chine mapuroteni-akapfuma uye chinopa mapuroteni anoda vanhu vanogara vasina nyama.
Mune inotevera misoro, iwe unozodzidza nezve izvo zvakakosha mabhenefiti ehuku, uyezve kuti ndeapi mabikirwo aunogona kugadzira neichi chibage kumba. Buda!
Chickpeas dzakapfuma kwazvo mu fiber uye izvi zvinobatsira nzira yese yekugaya uye zvinobatsira munhu kurasikirwa uremu, kubvisa mafuta asingadiwe uye makabhohaidhiretsi. Uye zvakare, huwandu hwayo hweprotein hunoita kuti uve nehurefu hwakaonda, izvo zvinoita kuti muviri wako usimbe uye uve nehutano.
Imwe bhenefiti yakakosha ndeyekuti inobatsira kubvisa glucose kubva muropa, izvo zvakanaka kune avo vane chirwere cheshuga kana vanogona kuve nedambudziko rehutano. Tsanga dzinobatsira mune dzimwe nyaya dzemwoyo, senge kudzikisa cholesterol yakaipa, BP uye vamwe.
Ivo vane matambudziko emapfupa vanofanirwawo kushandisa nhokwe. Ipfuma mune zvinovaka muviri zvakadai secalcium uye phosphorus izvo zvinochengetedza kusimba uye kutsungirira kweiyi mitezo yakakosha kwazvo mumuviri wemunhu.
Kune vakadzi, kudya ichi chinonaka inyaya yekudikanwa. Zviyo zvinobatsira kudzivirira kusagadzikana kwechibereko, zvakapfuma mu folic acid, inozadza zvitoro zvesimbi zvakabviswa panguva yekutevera, uye inobatsira kudzikisa njodzi yekenza yemazamu.
Unogona kuwana nhokwe muzvitoro zvine hunyanzvi mukutengeswa kwezvigadzirwa uye mune mamwe masupamaketi akazara, aine zvimwe sarudzo. Mutengo unosiyana zvakanyanya kubva kudunhu kuenda kudunhu, asi iwe unogona kuwana kori yezviyo zvakaoma pane mawebhusaiti e12 kusvika 15 reais. Yakachipa kwazvo uye yakanaka nekuti inobhadhara mushure mekusvinwa.
Nzira yakanakisa yekugadzira nhokwe kuidiridza mumvura kuitira kuti ikure muhukuru uye ipe mikana yakawanda mukicheni. Iwe unogona zvakare kuibika, kana iwe uchida kugadzira yakatarwa mhando dhishi.
Zvisinei, iwe unofanirwa kutanga waisa hydrate. Saka, rega gorosi rinyorove kwemaawa maviri mundiro kana dhishi nemvura. Mushure meizvozvo, unogona kutanga kugadzirira.
Inotengeswa sechikafu muzvitoro zvekudya zvine hutano. Sezvo iri maindasitiri, inouya nezvinochengetedza, sodium nezvimwe zvinhu zvisina hutano, kuwedzera kune zvinonhuwira zvekugadzira.
Asi iwe unogona zvakare kushambidza uye kugadzira yako pachako chickpea tudyo kumba. Iyo yakanakisa crispy uye yakarongedzwa uye chichava chiyeuchidzo chekudya wega kana nemhuri yako nevashanyi.
Yakabikwa chickpeas inoshanda senge nhokwe dzakakangwa. Gara uchigeza zviyo usati washandisa, wobva waoma, mafuta, mwaka uye kubika kwemaminitsi makumi matatu. Chikafu chaicho chichabuda mupani.
Ndeapi mabikirwo akanakisa?
Chickpeas dzinowanzo shandiswa nevanhu vasingadye nyama sekunge vari mubato re nyama. Saka vanhu vanodya mupunga, bhinzi, saradhi, mbatatisi uye nhokwe panzvimbo yemombe kana huku.
Nekudaro, iwo akanakisa mapapiro ndeaya anoshandura nhokwe kuita nyama chaiyo. Sarudzo huru ndeye chickpea hamburger steaks.
Uchaisa hydrate bhinzi mumvura irikufashaira kweanenge maawa matatu uye nekuchinja mvura kubva pamota iyi katatu. Paunenge wapedza, iwe uchaomesa iyo hydrated bhinzi woisa mumhepo yekubika kubika. Regai ibike kwemaminitsi makumi matatu.
Kugonesa kubviswa kwehuswa, kandira nhokwe mune imwe mbiya kana pani ine mvura inotonhora kwazvo. Ipapo iwe unotora mhizi dzakasvuurwa woisa mupani kuti sute pamwe nehanyanisi negariki. Iwe unowedzera zvinonhuwira zvaunoda, senge turmeric uye munyu.
Iko kusanganiswa kwagadzirira, ikozvino yave nguva yekukuya nhokwe mumarara, wedzera oatmeal diki uye gadzira iyo steaks. Unogona kushandisa steak kuidya nechikafu kana hamburger.
Kana iwe waifarira aya matipi, govera ichi chinyorwa pane ako masocial network
Chaizvoizvo kurasikirwa uremu: Deredza uremu uye kukwikwidza mubairo we3!
Mhinduro Dzinozorodza: ​​Ona ZVAKANAKA UYE ZVINONYANYA KUSHANDA!
Kufutisa chirwere here? Tsvaga zvese nezve iyi nyaya pano!
Natural Remedies for Headache: Tsvaga akanakisa apa!